Tag: chakawedzerwa chokwadi | Martech Zone
Tag: yakawedzera chokwadi
Kamera IQ: Shandisa Yakawedzera Chokwadi (AR) Kugadzira Virtual Chigadzirwa Edza-Ons
China, July 15, 2021 China, July 15, 2021 Douglas Karr
Kamera IQ, isina-kodhi dhizaini chikuva yeAugmented Reality (AR), yatanga Virtual Try-On Composer, mamiriro-e-iyo-e-dhizaini dhizaini inoita kuti ikurumidze uye nyore kumakambani mune runako, varaidzo, chitoro, uye mamwe matekiniki ekuvaka matsva AR-based Virtual Edza-Pane zviitiko. Mhinduro nyowani inofungidzirazve kutengeserana kweAR nekugonesa mabhenji kuti agadzire zvigadzirwa zvavo nekurarama kwechokwadi-kuhupenyu uye kwechokwadi pavanenge vachiwedzera rondedzero yezvinhu zvine mazita uye yakasarudzika inokura iyo inobata uye kukurudzira vatengi kuburikidza
Mutengi-Chekutanga E-Commerce: Smart Solutions yeiyo Imwe Chinhu Chausingakwanise Kuwana Kuti Usatadza
Iyo denda-nguva pivot kune e-commerce yauya neakachinja vatengi tarisiro. Kamwe kukosha-kuwedzera, zvinopihwa pamhepo izvozvi zvave chekutanga chekubata mutengi kune akawanda mabhii ezvitoro. Uye sezvo fanera huru yekudyidzana kwevatengi, kukosha kweiyo chaiyo vatengi rutsigiro iri panguva yese yakakwirira. E-commerce vatengi vatengi vanouya nematambudziko matsva uye kumanikidza. Kutanga, vari-pamba vatengi vari kushandisa yakawanda nguva online vasati vaita kwavo kutenga zvisarudzo. 81% yevakapindura vakatsvaga yavo
Iyo Yekupedzisira Tekinoroji Maitiro muRetail
China, January 28, 2021 China, January 28, 2021 Rachel Peralta
Kutengesa chikamu chakakosha chehupenyu hwese. Iyo mushini wepasi rese wakagadzirwa kununura uye kushandira vatengi kumarudzi ese. Vanhu zvakaenzana vanonakidzwa nekutenga muzvidhinha-uye-matope uye muzvitoro zvepamhepo. Naizvozvo, hazvishamise kuti indasitiri yekutengesa yepasi rose inotarisirwa kusvika $ 29.8 trillion muna 2023. Asi, haigone kuzviita yega. Kune zvikonzero zvakawanda iyo indasitiri yekutengesa inoda kuti irambe ichikurumidza neazvino tekinoroji kuvandudzwa. Kutevera
Zvingaita Sei Kuti Kuwedzeredzwa Kwechokwadi Kukanganisa Kufuridzira Kushambadzira?
China, Gumiguru 15, 2020 Muvhuro, Ndira 18, 2021 Elma Beganovich
COVID-19 yachinja matambiro atinoita. Nedenda rinopisa kunze, vatengi vari kusarudza kugara mukati uye kutenga zvinhu online panzvimbo. Ndosaka vatengi varikuisa mukati mevanokurudzira zvakanyanya uye zvakanyanya nezve-sei mavhidhiyo pane chero chinhu kubva kuyedza pamuromo kuti vatambe mitambo yedu yevhidhiyo yatinofarira. Kune zvimwe pamusoro pemhedzisiro yedenda pane kukurudzira kushambadzira uye mitengo, tarisa yedu yazvino kudzidza. Asi izvi zvinoshanda sei kune izvo zvinhu izvo zvinofanirwa kuonekwa
7 Mienzaniso inoratidza Kuti AR Ine Simba Sei Mukushambadzira
China, July 5, 2018 Laura Buckler
Unogona here kufungidzira chiteshi chebhazi chinokutandadza iwe uchimirira? Zvingaite kuti zuva rako riwedzere kunakidza, handiti? Izvo zvinokukanganisa iwe kubva kunetseka kunoiswa nemabasa ezuva nezuva. Zvaizoita iwe kunyemwerera. Nei mabhureki asingakwanise kufunga nezvenzira dzakadai dzekugadzira zvigadzirwa zvavo? Mirira; vakatozviita! Pepsi akaunza chiitiko chakadai kune vafambi veLondon kumashure muna 2014! Iyo yekugara bhazi yakatanga vanhu munyika inonakidza yevatorwa,